Sal 98, 1-3: Midera an'i Jehovah ny olom-boavonjy satria
1- Nanao fahagagana Izy,
2- Namonjy Izy
3- Namindra fo Izy
Apo 5, 6-10: Ny nahafatesan'i Kristy (and 9)
1- Nandatsaka ny rany ho famonjena (and 9/a)
2- Namonjy ny olona rehetra tsy ankanavaka (and 9/b)
Jao 12,44-50: NY TENIN'I JESOA.
Miresaka amin'ny vahoaka maro i Jesoa tao ireo mpanara-dia (mpianatra), tao ireo Jiosy, tao ireo Grika. Miteny sy miresaka mivantana amin'izay
maha-Andriaùmanitra Izy ka milaza fa izay mahita Azy dia mahita an'ANdriamanitra sady mandre ny teniny mihitsy satria Andriamanitra no naniraka sady nampiteny
Azy. Ny tenin'i Jesoa tokoa mantsy:
1- Natao hinoana mba hananana ny famonjena (and 47):
Milaza ny antony nahatongavany teto amin'izao tontolo izao Jesoa. Nambarany fa tonga teto an-tany Izy, natao hinoana. Izay mino Azy dia an'Andriamanitra Ray.
Izy no Andriamanitra tonga hamonjy izao totolo izao ao anatin'ny maizina (tandindon'ny fahafatesana) mba hananan'ny olona fahazavana (tandindon'ny fiainana).
Jesoa Kristy no Ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ka izay mino azy no hanana ny famonjena. Efa vitan'Andriamanitra (Jesoa Kristy) ny asam-pamonjena,
nandatsaka ny ràny mba ho famonjena, ary namonjy no olona rehatra tsy ankanavaka Izy. Araka izay voasoratry ny mpanao salamo hoe "Efa nahita ny famonjena ny vazan-tany rehetra" (Sal 98.3).
Ry havana malala, te-handray ny famonjena koa ianao? Tsy mba navahan'Andriamanitra ianao fa efa namindrany fo sy nampahalalany izany famonjena izany koa ankehitriny. Mbola miteny amintsika amin'ny alalan'ny Soratra Masina sy ny toriteny entin'ny mpanompony Andriamanitra. Minoa ny teny izay nampitondraina. Natao inoana ireny tenin'nAndriamanitra ireny mba hananana ny famonjena. Raiso, ekeo, iaino ny tenin'Andriamanitra mba hanananao fiainana satria natao inoana ny tenin'i Jesoa.
2- Natao hotandremana mba tsy hanamelohana (and 48):
Hotsarain'ny tenin'Andrimanitra ny olona. Io teny io no hanamelohana izay nandà sy izay tsy nandray azy. Tonga teo amin'ny olona ny teny famonjena fa tsy noraisiny sy tsy notandremany. Mpitsara azo antoka ny tenin'i Jesoa satria teny fahamarinana, ka izay nitandrina ny teny dia nandray ny teny fampanantenana nomeny. Tsy inona izany fa fiainana. Ho avy hitsara tokoa mantsy i Jesoa (Ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo teto an-tany ary niverina ao amin'ny Ray indray) hiseho amin'ny maha teny Azy (hitsara) na haneho ny heriny, ny fahefany, ny fahendreny, ny fahalalany. Io ilay lazain'ny Apokalipsy hoe : "manana tandroka fito sy maso fito (izany hoe fahendrena sy fahalalana) Apo 5-6.
Ry havana, ny tenin'Andriamanitra norenesinao hatramin'izay, moa noraisina sy notandremanao va? Toy ny sabatra ny tenn'Andriamanitra (sabatra = fitsarana), ka hitsara sy haneho ny fahefana izay hananany. Tsarovt fa natao ho tandremana ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanamelohana antsika. Ny atao hoa mitandrina dia mikajy, manome lanja ny hasarobidiny, mankatoa sy manaraka. Fanontaniana mampieritreritra: vitanao ve ny fanekena hoe hamaky ny Baiboly isan'andro? Sao mba namaky ihany fa tsy nankatoavina, najaina? Raiso sy hankatoavy ny tenin'Andriamanitra, fa izany no hanananao fiainana sy sty hizoranao ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay.
Fehiny: Ny tenin'i Jesoa dia natao hotandremana mba tsy hanamelohana ny olona any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mialoha izany dia ekeo sy raiso amin'ny finoana fa tena tenim-pamonjena hananana ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny Voninahitra, fa izao tenin'Andriamanitra koa anie hamelona ny finoana mba hanananao ny fiainana mandrakizay. AMENA!